बालबालिकाको प्रशंसा गर्न चुक्नुभयो कि ! | Himalaya Post
Posted by Himalaya Post | ७ माघ २०७६, मंगलवार १४:१८ |
काठमाडौँ – तपाईंले कहिल्यै बालमनोविज्ञानको बारेमा सोच्नुभएको छ ? उनीहरुको आनीबानी व्यवहारको विषयमा ध्यान दिनुभएको छ ? उनीहरुले गरेका गतिविधिबारे गहिरिएर सोच्नुभएको छ ?
यदि छैन भने उनीहरुका क्रियाकलापबारे आजैदेखि ख्याल गर्ने बानी बसाल्नुहोस् । मनोविद्का अनुसार पाँच वर्षसम्म बालबालिकालाई आमाबुबाको न्यानो माया र साथ चाहिन्छ । तीन वर्षका बालबालिका जुनसुकै काम गर्न पनि अघि सर्छन् । चार वर्ष पुगेपछि आफ्नो सामानका लागि झगडा गर्न थाल्छन । पाँच वर्षको पुग्दा अरुलाई हेप्न र हेपिन थाल्छन् । उसको होडबाजी शुरु हुन्छ । साधारणतया गलत र सही के हो भन्नेबारेमा विचार गर्न थाल्छन् । यो बेलामा अरुको नक्कल गर्ने र ठूला मान्छेले जस्तै क्रियाकलाप गर्ने रुचाउँछन् ।
चकचके र चुलबुले अवस्थामा बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझेर काम गर्न सकिएन भने उनीहरुमा दीर्घकालीन असर हुने बताउनुहुन्छ मनोविद् डा नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना । उहाँका अनुसार नराम्रै काम गरेको भए पनि बालबालिकालाई प्रशंसा गर्नुपर्छ, ताकी उनीहरुको आत्मबल र जाँगरमा कमी नआओस् । “अभिभावकको निगरानीमा बालबालिकालाई उमेरअनुसारको काम गर्न दिनुपर्छ, दोहोरो सञ्चार गर्नुपर्छ, अरुका अगाडि राम्रा कुराको प्रशंसा गर्नुपर्छ, तब मात्रै उनीहरुको क्षमता विकास हुन्छ र आत्मबल बढ्छ, जसले भविश्यसम्मै बालबालिकालाई फाइदा पुग्छ”, डा ठगुन्नाले भने ।
बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि उनीहरुको मनोविज्ञान बुझेर अभिभावकले त्यहीअनुसारको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रारम्भिक बाल विकासविज्ञ मीनाक्षी दाहाल बताउँछन् । “अहिले हाम्रो ध्यान उपचारमा केन्द्रित छ तर त्योभन्दा पहिले समस्या आउनै नदिन प्रचारात्मक कार्यक्रम गर्न जरुरी हुन्छ”, डा दाहाल थप्छन् ।
प्रतिकूल वातावरणले बालबालिकाका लागि मानसिक र संवेगात्मक पक्षको विकासमा क्षति हुने र उचित ढङ्गले मनो–सामाजिक पक्षको विकास हुँदैन । घरेलु हिंसा, उपेक्षित र स्याहार नपुगेका बालबालिकामा अन्यको तुलनामा मानसिक र व्यावहारिक समस्या देखापर्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठ बाल क्षमता विकासमा पारिवारिक वातावरण हुनु जरुरी रहेको बताउँछन् । उनले अझै पनि मुलुकमा प्रारम्भिक बालविकासलाई ध्यान दिन नसकेको महसुस भएको बताउँदै अब बन्न लागेको सङ्घीय शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्ने आशा व्यक्त गरे।
प्रारम्भिक बाल विकासविज्ञ डा दाहालले पुस्तक बालबालिकाको क्षमता विकासका लागि पुस्तक उपयोगी रहेको बताउँछन् । चित्र र विज्ञका लेख समावेश गरी बनाइएको पुस्तक हरेक बाल विकास केन्द्र र सहयोगी कार्यकर्ताका लागिसमेत उपयोगी छ । सेतो गुराँसले बालविकासका लागि आज काठमाडौँमा एक अन्तक्रियात्मक कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेको थियो । रासस
Previousओली र मोदीले स्वीच थिचेर उद्घाटन गरेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको फाईदा के ?
Nextकञ्चनपुरस्थित भीमदत्त बसपार्कको उद्घाटन
‘धामी–झाँक्री प्रथाविरुद्ध कानुनी प्रणाली निर्माण गर’-सर्वोच्च अदालत
२८ मंसिर २०७४, बिहीबार ०७:५७
१४ पुष २०७६, सोमबार १४:०९
२४ असार २०७५, आईतवार १२:०१
२८ श्रावण २०७७, बुधबार २०:०६